जीवन सुन्दर छ। तर आपतकालिन स्तिथि र दुर्घटनाहरुले कब ऎसलाई बाधा पर्छा हामी कहिले पनि थाहा पाऊन सकदैनाऊं। दुर्घटना र विषाक्तताहरू प्राय तब हुन्छ जब नानी वातावरणमा उत्सुक हुन्छ र उनिहरुको पहुंच बड़छ तर हानिकारक वस्तुहरुको पहचान गर्न असक्छम हुन्छ। यो 1 देखी5बर्षमा हुन्छ जब नानी हानिकारक घरेलु चीजहरू बारेमा सचेत हुन्छ। जनबुझेर विषाक्तता र दुर्घटनाहरू किशोरहरूमा हुन्छ जब उनीहरू भावनात्मक रुपमा अस्थिर हंछन र खतरनाक अनुभवहरू प्रयोग गर्छन्।
निम्न कुनै आपतकालिनमा भएको नानीलाई देखन भयानक अनुभव हुन सक्छ, तर शान्त रहन आवश्यक छ। मेरो सुझाव छ कि तपाइँले "सँधै के गर्ने?" "चोटपटक र दुर्घटनाहरू" लेखमा फेरि पढ्नुहोस्, निम्न आपतकालीन परिस्थितिमा पनि यही सिद्धान्तहरू पालन गर्न पर्छ। सबै आपतकालिनहरूमा, पीडितलाई प्राथमिक उपचार पछि तुरून्त अस्पतालमा लैजान आवश्यक छ। यद्यपि यो लेख मुख्य रूपमा नानीहरूको लागि हो, उपचारका सिद्धान्तहरू वयस्कहरूको लागि समान छन्।
फिट / दौरा
कलाई फिट भानिनछ?
फिटस धेरै प्रकारकामा देखिन सक्छ जस्तै एकोरो हेर्नु वा हात र खुट्टाको अनैच्छिक चाल। फिट आऊंदा ननिले आंखा खोले भा पनि नानी बेहोस हंछ र कसैलाई प्रतिक्रिया दिन सक्दैन। एपिसोडको बखत, तिनीहरू पेशाब वा पैखाना पनि गर्न सक्दछन्।
यदि तपाइँको नानीले फिट गरदैछ भने के गर्ने?
मद्दतको लागि बोलौनू होस। कोई वरिपरि छैन भने फोन प्रयोग गर्नुहोस्।
चोटपटकबाट बाच्न नानीलाई भुँइमा सुतायर राख्नुहोस्।
बान्ता छाती भित्र पस्न बाट रोक्नको लागि, नानीलाई शरीर के एक पटी सुताउनु होस । यदि बान्ता भयो भने औंलाले बिस्ताराई हटाउनुहोस् ।
यदि तपाईंसँग मिडाजोलम स्प्रे (निडिसिप, नाइजिलम आदि) छ भने अनि दौरा लगभग3मिनेट सम्म रोकिएन भने एक पटक स्प्रे गर्नुहोस।
फिटको दौरान र फिट रोकिए पछि जबसम्म सामान्य चेतना आऊंदैन, पानी वा खाना नदिनुहोस्।
यदि यसले उपचारमा ढिलाइ गर्दैन भने, तपाइँ वा कसैले घटनाको भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस। भिडियो बादमा डाक्टरलाई देखाउनू होस। धेरै असामान्य घटनाहरू अचिभवाखारुले फिट समझनछन अनी बिना प्रभाव एंटी-फिट्स औषधी ले उपचार गरिंछ।
डुब्नू दुई उमेर समूहहरूमा देखा पर्दछ। सानो नानीहरू बाल्टिनमा (यदि उनीहरूको टाउकोले बाल्टी भित्र पस्यो भने तिनिहरू आधा बाल्टी पानीमा वा बाथरूम को टबमा पनि डूबन सक्छन! उनीहरुलाई कहिले पनी बाथरूम मा एक्ल न छोड़नु होस। डुब्नुको लागि अर्को उच्च जोखिमको उमेर किशोरावस्था हो। तिनीहरू
पोखरी खोला, नदी वा सागरमा डुबछन्।
यदि उपलब्ध छ भने,लाइफगार्ड सूचित गर्नुहोस् । यदि तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ भने, तल हृदय-पल्मोनरी पुनरुत्थान (सीपीआर) को चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
1. पीड़ित लाई पानीबाट बाहिर निकाल्नुहोस्
2. तपाईको कान पीड़ित को मुख र नाकमा राखेर सास फेर्न जाँच गर्नुहोस् (यस जगह बाट सबै भंदा राम्रो देखिन्छ)। के तपाईंले आफ्नो गालामा हावा महसुस गर्नुहुन्छ वा छाती चालु छ? यदि सास फेरेको छैन भने, 10 सेकेन्डको लागि नाडी जाँच गर्नुहोस्। यदि कुनै पल्स छैन भने सीपीआर शुरू गर्नुहोस्। सीपीआर शुरू गर्न सावधानीपूर्वक पीड़ितलाई कडा सतहमा ढलकाउनु होस
3. वयस्क वा 15 बर्ष भंद सानो नानी को लागि एउटा हात अर्को हातको माठी औंलाहरू अन्तर्क्रिया गरी राख्नुहोस्। एक हात छातीको बीचमा निप्पल लाइनमा राख्नुहोस्। शिशुका
लागि (१ बर्ष भन्दा कमको बच्चा), स्तनको हड्डीमा दुई औंला राख्नुहोस्।
4. वयस्क वा नानी को लागि कम्तिमा २ इन्च तल थिच्नुहोस् (कंप्रेशन)। शिशुका लागि, १ इन्च तल थिच्नुहोस्। ब्रेस्टबोन वा पसलको अन्त्यमा नथिच्नुहोस्। 100-120 प्रति मिनेट को गरिमा छातीको कम्प्रेसन दिनुहोस्। छाती कंप्रेशन को बिचमा पूर्ण रूपमा उठ्न दिनुहोस्।
5. सांस दिन लागी पीड़ित को नाकलाई चिम्टीले बन्द गर्नुहोस्। सामान्य सास लिनुहोस्, पीड़ित को मुखलाई आफुको मुख्ले वायुरोधी सिल सिर्जना गरी कवर गर्नुहोस्। त्यसपछि डुई पटक एक- सेकंड लामो सास दिनुहोस्।
6. जबसम्म व्यक्ति सास फेर्न थाल्दैन वा आपतकालीन मद्दत आउँदैन, 30 कम्प्रेसन र2सासको यस चक्रलाई जारी राख्नुहोस् । बच्चाहरूमा। 15 बर्ष भन्दा कममा, जब दुई उद्धारकर्ताहरू उपलब्ध हुन्छन् चक्र 15:2हो। वयस्कहरूमा, सबै परिदृश्यहरूमा र बच्चाहरूमा जब केवल एक उद्धारकर्ता हुन्छ, चक्र 30:2हो (15 बर्ष भन्दा कम उमेर र2उद्धारकर्ताहरू छन् भने, चक्र 15:2हो)।
7. दुई मिनेट पूरा गरिसकेपछि मात्र जांच गर्नु होस की पिडितले सांस फेर्न थालेको छ कि छैन। यदि पीडित अझै सास फेर्दै छैन, भने माथिको चरणहरू दोहोर्याउनुहोस्।
8. यदि तपाईं माथिको चरणहरू अनुसरण गर्न विश्वास गर्नुहुन्न भने, याद राख्नुहोस् कि सीपीआरको कुनै पनि प्रयास सीपीआर न दीनू भन्दा उत्तम हो ।
9. यदि तपाईं आफ्नो मुख पीडितको मुखमा राख्न तयार छैन भने केवल कंप्रेशन गर्नुहोस्।
10. चलचित्रमा पेटमा भए को पानी थिचेर हटाउने प्रयास गर्छन्, यो अप्रभावी हो र मूल्यवान समयलाई खेर फाल्छ। फोक्सोमा पानी भर्नु समस्या हो, पेटमा होइन।
यदि तपाईं बेहोश महसुस गर्नु हुँदैछभने,
ढल्नुहोस् वा बस्नुहोस्। फेरि बेहोश हुने सम्भावना कम गर्न, छिट्टै नउठ्नुहोस् (कम्तिमा5मिनट ढल्नुहोस्)।
यदि तपाईं बस्नुहुन्छ भने आफ्नो टाउको आफ्नो घुँडाको बीच राख्नुहोस्।
यदि तपाईं अरू कसैलाई बेहोश भएको देख्नुहुन्छ भने
नानी लाई ढलकौनू होस।
यदि कुनै चोटपटक छैन र नानीले सास फेर्दै छ भने, उसको खुट्टालाई मुटुको तहभन्दा 1 फिट माथि उठाउनुहोस्।
बेल्ट, कलरहरू र अन्य तंग लुगाहरू खोल्नुहोस्।
फेरि बेहोस हुने सम्भावनालाई कम गर्न, ननिलाई कम्तिमा5मिनेट को लागी सुताइराख्नुहोस्। यदि पीड़ित एक मिनेट भित्र चेतना प्राप्त गर्दैन भने, स्थानीय आपतकालीन नम्बरबाट मद्दत को लागी कॉल गर्नुहोस।
सास फेर्न जाँच गर्नुहोस्। यदि पीड़ित सास फेदै छैन भने, माथि वर्णन गरिए अनुसार सीपीआर शुरू गर्नुहोस्। मद्दत आइपुग्दा वा पीड़ित सास फेर्न थाल्दा सम्म सीपीआर जारी राख्नुहोस्।
यदि नानीको अतीतमा बेहोश हुनु पर्ने इतिहास छ भने, अर्को सम्भावित दिनमा डाक्टरद्वारा मूल्यांकन गर्न बच्चालाई लानुहोस।
नानीहरु घरेलु चीजहरू जस्तै केरोसिन, कपूर, नेफ्थलीन बल्स, डिटर्जन्टहरू, मुसा हत्यारा विष वा औषधिहरू बाट विसित हुन्छन। यी चीजहरू सँधै नानीहरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्।
नानी विषित भएको छ भने कहिले शंका गर्ने?
यदि नानी लाई "अचानक" बान्ता, निन्द्रा, अनुत्तरदायी वा फिट भयो भने। ध्यान गर्नुहोस् कि मैले अचानकलाई हाइलाइट गरेको छु। कुनै पनि दुर्घटना वा विशेषताको अचानक सशुरुआत मुख्य लक्षण हो। ती नानी लक्षण शुरू हुनु अघि स्वस्थ हुनछन्।
यदि विषाक्त प्रदार्थ मुखमा देखिन्छ भने, यसलाई हटाउन कोशिस गर्नु होस। हटाए पछी कुल्ला गराउनू होस। यदि विष छालामा देखिन्छ भने धुनु होस। कहिलेकाँही छाला मार्फत विषाक्तता हुन्छ। विषाक्त प्रदार्थ डाक्टरलाई देखाउन अस्पताल लैजानु उचित रहनछ। तुरुन्त अस्पताल लैजानुहोस्।
घरेलु उपचार जस्तई वांता गर्ने प्रयास प्रभावहीन र सम्भावित खतरनाक हुन्छन्। डिटर्जन्ट, क्यारोसिन, कपूर, नेफ्थलीन हरू बाहिर बान्ता गर्ने प्रयासले खाना पाइप (एसोफैगस) काट्न सक्छ। यदि विष मुख बाट हटाको थियो भने पनी वंता को कोशिश न गर्नुहोस।
शान्त रहनुहोस्, चिन्ताले मुटुको दर बढाउँदछ र त्यसैले विष संचार। पीड़ितलाई आश्वासन दिनुहोस्। करिब 85% टोकनेहरू गैर-विषालु सर्पहरू द्वारा हुन्छन् र बाँकी 50% मा, सर्प विष इंजेक्सन गर्न असफल हुन्छ। जुत्ता, मोजा र गहना हटाउनुहोस्।
काटिएको अंगलाई स्थिर गर्नुहोस्। अंगको कुनै पनि आन्दोलनले विष द्रुत छिटो हुन्छ। कुनै पनि चीज, छडी, छाता, क्रिकेट ब्याट, बांस जस्ता स्थिर गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्थिर गर्न बाँध्न पट्टी वा कपडा को प्रयोग गर्नुहोस्। फ्रैक्चर अंग जस्तो बांधनू होस। डोरी को प्रयोग नगर्नुहोस्। विष वेंस नसा मार्फत मुटुमा जान्छ। त्यसपछि यो विभिन्न अंगहरुमा सर्दछ। पट्टी वेंस ब्लॉक गर्न पर्याप्त हुन्छ कारण वेंस छाला तल मात्र हुन्छ। आर्टरी ती नस हुन जो अंगमा रगतको आपूर्ति गर्छ। कडा लिग्रेचर आर्टरी लाई पनी ब्लॉक गर्छ जस्ले सांप ले टोकेको अंगमा रगत को आपूर्ति अवरुद्ध गर्दछ। यसले गम्भिर अंग क्षतिको कारण गर्न सक्छ जुन अंगको विच्छेदनको परिणाम बनाउन सक्छ। टोकेको अंग लाई हृदयको स्तर भन्दा तल राख्नुहोस्।
पीड़ित लाई लियेर तुरुन्त अस्पताल जानुहोस। बिरामीलाई गाडीमा लैजानुहोस् वा उपलब्ध नभएमा उसलाई बोकेर जानुहोस्।
यदि तपाईं पीडित हुनुहुन्छ र एक्लो हुनुहुन्छ भने, बिस्तरी हिड्नुहोस् न दगुर्नु होस्।
धेरै घरेलू उपचारहरू ( जो चलचित्रमा लोकप्रिय) जस्तै विष निकालन टोके को ठाऊं मा चूसनु, अंग जलाउनु, बिजुली चकित पार्नु, घाउमा काट्नु प्रभावहीन र सम्भावित हानिकारक हुन्छ।
सर्पदंश बाट कसरी बांचनू
रातमा घुँडाको लम्बाई भए को जूता (गमबुट) लगाएर र टर्च प्रयोग गरेर हिड्नुहोस् , पूर्ण-बाहिरी शर्ट, र पैंट लगाउनुहोस्। हिँड्दा, भारी चरणको साथ हिड्नुहोस् जसले सर्पहरू कम्पन पत्ता लगाउन सक्दछ र टाढा जान्छl
घाँस काट्दा वा रूखहरूको आधार खाली गर्दा छडी बोक्नुहोस्। घाँस वा पातहरू पहिले सार्न स्टिक प्रयोग गर्नुहोस्। सर्पलाई टाढा सर्ने मौका दिनुहोस्।
ढेरमा राखिएको घाँस टिप्नु अघि दाउराले हल्लाऊनू होस।
पशुखाद्य र फोहर घरबाट टाढा राख्नुहोस्। तिनीहरूले मुसालाई आकर्षित गर्छन् र सर्पहरू मूसा पछ्याउँदछन्।
तपाईंको ढोका र झ्यालबाट बोटहरूलाई टाढा राख्नुहोस्। वोट सांप लाई चढ्न मद्दत गर्दछ।
जंगलमा पहिला बनियेको बाटोमा मात्र हिंड्नुहोस ।
बाहरी वस्तु नीलेर सांस अड़किनू
सानों नानीहरु बहिरी वस्तुहरू संग आकर्षित हुनछन र त्यस्लाई निलिपठौंछन। सिक्का, बदाम, पिन जस्तै नानीको मुख भन्दा सानो केहि पनि चीज नानी समावेश गर्न सक्छन। यी दुर्घटना रोक्नको लागि उत्तम तरिका नानीलाई उसको मुखबाट सानो केही खेल्न नदिनु ह र नानीको पहुँचबाट टाढा राख्नु हो। बदाम, चना आदि सानी नानी लाई पिसेर मात्र दीनू।
1. यदि वस्तु मुखमा देखिन्छ भने, औंलाले हटाउने प्रयास गर्नुहोस्। यदि देखन सक्दैन भने, हटाउने प्रयास नगर्नुहोस्। त्यसो गर्नाले वस्तु अझ भीत्र पसन सक्छ।
2. यदि पीड़ित खोक्रा लिन सक्षम छ भने, उसलाई खोकी जारी राख्न दिनुपर्छ। यदि पीड़ित को दम घुटदै छ र कुनै आवाज़ निकालन सक्दैन भने तपाईंले प्राथमिक उपचार दीनू पर्छ।
3. वयस्क र 1 बर्ष भदा सानी लाई हातले कम्मर लपेट्नुहोस्। एक हातले मुट्ठी बनाउनुहोस् र पीड़ित को नाभीको अलि माथि राख्नुहोस्। आफु भन्दा धेरै कम हाइटको पीड़ित (जस्तै नानी)छ भने घुँडा टेक्न पर्छ।
4.अर्को हातले मुट्ठी समात्नुहोस्। पेटमा कडा प्रेस गर्नुहोस्, छिटो, माथिल्लो दिशामा - पिडितलाई माथि उठाउने प्रयास गरे झैं। पांच पटक येसो गर्नुहोस् र पीडितको मुखमा जाँच गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया जारी राख्नुहोस् जब सम्म वस्तु बहिर निस्किंदैन।
5. एक बर्ष देखी सानू नानी (शिशुहरू) मा, नानीको टाउको र ज्यु फोरआर्म को सहायता ले घोप्टो पारेर आफनों जांघमा राख्नुहोस् ताकि सिशुको टाउको उसको छातीभन्दा तल होस। एउटा हातको हिल प्रयोग गरी सिशुको काँधको ब्लेडहरू बीच अली जोर्ले थप्पड दिनुहोस्।
6. यदि वस्तु बाहिर निस्किएन भने, बच्चाको ढार पटी समर्थन गरी र अनुहार आफू पटी पारेर जांघमा राख्नुहोस्। नानी को टाउको उसको शरीर भन्दा तल होस्। डीयू औंलाहरू बच्चाको स्तनको हड्डीमा निप्पलको रेखामुनि राख्नुहोस् र द्रुत छाती मा थ्रुस्ट्स दिनुहोस्।
7. यदि पीड़ित बेहोश भयो भने उसलाई उसको पीठोमा भुँइमा राख्नुहोस्, सीपीआर गर्नुहोस्। यदि वस्तु मुखमा देखिन्छ भने, एक औंलामा मुख भित्र हाली झिक्नुहोस्। यदि वस्तु अडिग छ वा यो दृश्यात्मक छैन भने, सीपीआर जारी राख्नुहोस् जबसम्म ऊ सचेत हुँदैन वा सहयोग आइपुग्छ।
धेरै जसो भारतीय राज्यहरूमा आपतकालीन एम्बुलेन्स सेवाको लागि फोन नम्बर 108 वा 111 हुन्छ।
नीलेर सांस अड़किनू